Nhau Dzemabhiza | Noti Mahosi
Nyika yebhiza inonakidza uye neizvi zviri pachena kwatiri kuti kune akawanda Nhau nezvenyaya iyi. Mune ino nzvimbo iwe unowana ese marudzi ese enhau akaunganidzwa zvakatsoropodza kuti unakirwe uye uve parizvino pane ruzivo rwune chekuita nemhuka idzi.
Nhau, matipi uye kunyange anecdotes ane hukama nemabhiza. Uye kana tichitaura pamusoro penyaya tinoreva kuti kune akawanda mapoka anoreva kune nyika yemabhiza, mitambo, Olimpiki, kurapwa, mhedzisiro uye yakareba etc. Izvo zvichafadza vateveri venyika ino, iyo kunyangwe ichidhura zvishoma ichagara ichisiya isu manzwiro akanaka.
Hatigone kukanganwa kuti pane sarudzo ye taura pane imwe neimwe bhiza nhau uye munzvimbo ino chaiyo ipfungwa yakanaka kukwanisa kupa maonero edu.
Zvinodhura zvakadii kuchengeta bhiza pamwedzi
Uri kufunga nezvekuwana bhiza here? Usati waita chero chinhu, zvakakosha kuti iwe uzive kuti zvakadii kuti zvichengetedze zviri munzvimbo yakanaka, ...
Mabhiza anorara sei?
Mabhiza, semhuka dzese uye kunyanya zvipuka, zvinoda kuzorora. Asi kana iri yekutanga ...
Bhiza rekutanga, Hyracotherium
Iyo ndiyo Hyracotherium, bhiza riri rerudzi rwezvipuka zveparissodactyl, izvo zvakare zvakafanana ...
Lucy Rees, hukuru hwenyika yebhiza
kubudikidza rose sanchez inoita 7 makore .
Lucy Rees anobva kuWales uye anoonekwa seanokudzwa munyika yebhiza. Mukadzi uyu uyo ​​...
Hwechipiri hupenyu hwekare mabhiza
kubudikidza Angela Graña inoita 8 makore .
Mhizha munguva dzekutambudzika dzave kuita mufashoni, nekuti hazvisi nyore kutenga zvigadzirwa zvinodhura ...
Inotorwa Breyer Mabhiza
Breyer ikambani yekuAmerican, yakazvarwa muChicago, yakatsaurirwa kugadzirwa kwemifananidzo yemabhiza kuti itore Izvi…
Ungatasva Sei Paso Fino Horse
Iwo akanaka paso mabhiza haasi nyore kutasva, pane zvinopesana vanoda kutarisirwa kwakanyanya pachikamu ...
Mabhiza evanotengesa zvinodhaka veMexico vanohwina mujaho muUnited States
Nyika yemijaho yemabhiza yagara ichifungidzirwa, mune dzakawanda zviitiko kune kutaura kwemafiya kana kufurira ...
Zano nyowani rekukunda kutya kwekutasva bhiza
Kuda kwemabhiza chinhu chakazara zvachose, uye vanhu vazhinji vanotenda kuti chakapesana chinhu chinopwanya ...
Mazano ekuva mutyairi akanaka
Pasina kupokana imwe yemakiyi akakosha ekuva mutyairi akanaka ane chekuita ne ...
Tinofanira kugara tichifunga kuti mabhiza mhuka dzinonakidza kwazvo, asi kuti mune zvese zviitiko vane hunhu ...
Mamiriro ezvinhu aripo iye zvino emabhiza munyika
Nhoroondo yekurambidzwa kudya nyama yemabhiza muArgentina
Chii chinonzi kusvetuka rekodhi mukutasva bhiza